"ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး အခြေအနေ" - Delta News Agency
ရေးသားသူ – ဒေါက်တာမြ (မိသားစုဆေးပညာ)
၁၆ ၊ နိုဝင်ဘာလ ၊ ၂၀၂၀ ။ (ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး)
Pfizer ဆေးကုမ္ပဏီကြီးနဲ့ BioNTech ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတို့ ပူးပေါင်းပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ လူပေါင်း၄သောင်းကျော်ပါဝင်တဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး စမ်းသပ်မှု (အဆင့်-၃)ရဲ့ ကနဦးအဖြေအရ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူတွေဟာ ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအကြိမ်ထိုးပြီး ၇ရက်အကြာမှာ (ကာကွယ်ဆေး မထိုးထားတဲ့သူများနှင့်ယှဉ်လျှင်) ရောဂါကူးစက်ခံရမှုကို ၉၀%အထိ ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ။
ကာကွယ်ဆေး အမျိုးအစားက ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး အဆင့်မြင့်နည်းပညာတစ်ခုကို သုံးထားတဲ့ m-RNA vaccine ဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်လွယ်အောင်ပြောရင် ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ကောင်လုံးကို ယူထားတာမဟုတ်ဘဲ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်မှာပါတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇကုဒ်တွေကို သယ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ မော်လီကျူးအပိုင်းဖြတ်လေး (messenger Ribonucleic acid) တစ်ခုကိုပဲ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ထိုးပေးမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် တခြားသောကာကွယ်ဆေးတွေထက် ပိုပြီး စိတ်ချရမယ်လို့ ယူရပါတယ်။
ဒါဆို ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအသစ်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကကော?
ကာကွယ်ဆေးအထိုးခံရတဲ့သူတွေအတွက် တကယ့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမကူးစက်ခံရခင်ထဲက သူ့မှာပါတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်တွေက ကြိုသိပြီးသားဖြစ်လို့ ဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ antibody တွေ (ခုခံအားဆဲလ်တွေလည်းပါနိုင်) သွေးထဲမှာ အဆင်သင့်ဖြစ်တည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ မတော်တဆ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူက ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံလိုက်ရရင်တောင် အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို အများဆုံး ၉၀% ခန့်အထိ ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ ယူဆရတာပါ။
ကာကွယ်ဆေးရဲ့ စိတ်ချရမှုနဲ့ ဘယ်နှနှစ်ထိ ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတော့ ဒီနေ့ထိ စမ်းသပ်နေသူတွေကိုယ်တိုင်အပါအဝင် ဘယ်သူမှ အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ ဒါတွေကို သိရဖို့က စမ်းသပ်သူတွေက နောက်၂နှစ်ထိ စမ်းသပ်မှုတွေကို ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာပါ။
ဒီကာကွယ်ဆေးရဲ့ အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ ထိန်းသိမ်းသိုလှောင်ရ အင်မတန်ခက်မယ့်အချက်ပါပဲ။ တခြားကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ မတူတာက ဒီဆေးကို အပူချိန် *အနုတ်၇၀* ကနေ *အနုတ်၈၀*ကြား အေးခဲနေတဲ့ စနစ် (Ultra cold chain) နဲ့ သယ်ယူ ပို့ဆောင် သိုလှောင်ထားရမှာပါ။ ဒီစနစ်ဟာ ကျွန်တော်တို့လို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမပြောနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်ချို့အတွက်တောင် အဆင့်မြင့်တင်ဖို့ အတော်ကြိုးစားရဦးမယ့် စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Pfizer-BioNTech ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရဲ့ နောက်အားနည်းချက်တစ်ခုက အာနိသင်ပြဖို့ စောင့်ဆိုင်းရမယ့်အချိန်ပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒုတိယ dose ထိုးပြီး ၇ရက်နောက်ပိုင်းမှ အာနိသင်စပြမယ်လို့ ကနဦးအဖြေများအရ သိရပါတယ်။ အဲဒီတော့ အခုမှ ကာကွယ်ဆေးစထိုးမယ့်သူဆိုရင် ပထမဆေးတစ်လုံး ကို ဒီနေ့ထိုးရင် ဒုတိယတစ်ခါ နောက်ဆေးတစ်လုံးကို ၂၁ရက်မြောက်နေ့မှ ထိုးရမှာဖြစ်လို့ ဒုတိယဆေးထိုးပြီး ၇ရက်ထပ်စောင့်ချိန်ပါပေါင်းလိုက်ရင် ဆေးစထိုးတဲ့ရက်ကနေ အာနိသင်ပြဖို့ စုစုပေါင်း ၂၈ရက်အထိ စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကပြန်ပြောရရင် ဒီစောင့်နေတဲ့ ၂၈ရက်အတွင်း ကိုဗစ်ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုလို ၉၀% ခန့် ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ ဒီကာကွယ်ဆေးဟာ လူသားအားလုံး ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးက လွန်မြောက်ဖို့အတွက် လမ်းစပါပဲ။ တခြား တခြား ကုမ္ပဏီများကလည်း နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ကာကွယ်ဆေးတွေကို အဆင့်ဆင့် စမ်းသပ်နေကြပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အခုပြောနေတဲ့ Pfizer-BioNTech ရဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးက ဘယ်တော့ ရမှာလဲ?
ကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရ ယေဘုယျအားဖြင့် ဆိုးကျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ယူဆထားသလို အကျိုးရှိတယ်လို့လည်း တွေ့ရတဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုကို Pfizer- BioNTech က ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာပါတဲ့။ ဒီနှစ် ၂၀၂၀ မကုန်ခင်မှာ ကာကွယ်ဆေးလုံး အရေအတွက် သန်း-၅၀ခန့် ထုတ်လုပ်သွားနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပြီး၊ လာမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း သန်း-၁ထောင့်၃ရာခန့် ထုတ်လုပ်နိုင်မယ့် အခြေအနေရှိပါတယ်တဲ့။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကလူတွေအတွက် ဒီအရေအတွက်က လုံလောက်ပါ့မလား?
မလုံလောက်နိုင်သေးတာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ရသလောက်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက အလိုအပ်ဆုံးလူတွေအတွက် ဦးစားပေးဖြန့်ဖြူးသွားဖို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက စီစဉ်ထားရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေဆီပဲ ထုတ်သမျှကာကွယ်ဆေး အကုန်ရောက်မသွားအောင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေနဲ့ စနစ်တကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့ အစီအစဉ်မို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက်လည်း မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။
အခုလောက်ဆိုရင် ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးအသစ်အကြောင်း အတော်အသင့် သိရှိနားလည်သွားပြီလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီကိုဗစ်ရောဂါဟာ ကပ်ရောဂါကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုထဲ အားကိုးလို့ မရသေးပါဘူး။ အခြေခံ လိုက်နာရမယ့် ရောဂါကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတွေဖြစ်တဲ့ လက်ကို မကြာခဏဆေးကြောခြင်း၊ ပါးစပ်နှာခေါင်းစည်း mask တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာနေခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း ကာကွယ်ဆေးမရသေးခင် အခုလိုအချိန်မှာရော နောင် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အချိန်အထိပါ ဆက်လက်လိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒီစည်းကမ်းတွေကပဲ မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ မိမိချစ်ရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဖြစ်လို့ စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်းဖြင့် အသက်ကယ်ပေးကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းရင်း ဒီစာလေးကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
အားလုံး ကပ်ရောဂါဘေးဆိုးမှ လွတ်ကင်းကြပါစေ။
Referenced article/ webpages:
1. Pfizer and BioNTech Announce Vaccine Candidate Against COVID-19 Achieved Success in First Interim Analysis from Phase3Study
2. The Guardian News: BioNTech vaccine scientist says jab could halve Covid transmission
3. CNN News video: Dr Gupta talks to Pfizer CEO about vaccine effectiveness
မဲရုံ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှာ ကိုဗစ်ရောဂါတွေ့